Isube umphefumlo wamnye ingozi ngelixa iizigadla ezimbini zingqubana okwenkunzi zeGusha kuHola wendlela N2 ngentseni yanamhlanje – Ntu News
Isube umphefumlo wamnye ingozi ngelixa iizigadla ezimbini zingqubana okwenkunzi zeGusha kuHola wendlela N2 ngentseni yanamhlanje
December 7, 2021 December 7, 2021 Jasmin Rose	0 Comments
Kubhubhe umntu omnye kwaze konzakala umntu omnye kwingozi ebibandakanya iizigadla ezimbini ngentseni yanamhlanje. Ingozi yenzeke kuhola wendlela uN2 phantsi kwestrato saseRhini iGeorge. Esinye seziigadla nebesithwele ipineapples zigcwele zithe saa endleleni. indlela ivaleke ngokupheleleyo kwaye abaqhubi abahamba kuN2 ukusuka eGqeberha ukuya eMonti bayacetyiswa ukuba basebenzise uR72 njengenye indlela.
“ngumqhubi wesigadla esinye the wasweleka logama umqhubi wesinye isigadla wonzakele ngokumasikizi ukanti abo ncedo lokuqala kunye nohlangulo basazama ukucoca indlela khona ukuze ibenokulungela izithuthi kwakhona. Abasebenzisi bendlela bayacelwa ukuba basebenzise ndlela zimbi”, utshilo osisithethi sesebe lezothutho eMpuma Koloni, Unathi Bhinqose.
Kubongozwe abasebenzisi bendlela ukuba basebenzisane namagosa ezendlela okanye bathobele omthetho wabo.
← Ocean Warriors protest Shell at Nahoon
Buffalo City Soccer Clubs Up in Arms →
December 15, 2021 December 15, 2021 Jasmin Rose	0